Maraykanka oo dib u bilaabaya hubkii uu ka iibin jiray dalka boqortooyadda Baxrayn – Radio Daljir
Maraykanka oo dib u bilaabaya hubkii uu ka iibin jiray dalka boqortooyadda Baxrayn
Washington, May 12 – Wadanka Maraykanka ayaa dib u bilaabaya hubkii uu ka iibinjiray jaziiradda boqortooyadda ah ee Baxrayn ,laakiin Washington ayaa sheegtay in aanay qorshahani saanadda Militari lagaga iibinayo Manama aanay ku jirin qalabka lagu cabudhiyo dadka mudaharaadayaasha ah ee isbedel-doonka ah.
Wasaarrda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in hubka laga iibinayo Dalka Baxrayn muhiimaddiisu tahay dhinaca faacca dibadda , si wadankaasi uu iskaga waabiyo haddii quwado shisheeye ay gacanta la soo galaan arrimihiisa.
Iibka hubka ee dalka Baxrayn ayaa la hakiyey sanadkii hore markii dalkaasi Baxrayn uu cagta mariyey mudaharaadyo isbedel-doon ahaa oo lagu dalbanayey dimuquraadiyad.
Ururka cafiska caalamiga ah ee Amnesty International ayaa sheegaya in 60 qof lagu dilay dalkaasi Baxran tan iyo mudaharaadyadii isbedel-doonka ahaa dalkaasi ka hanaqaaday bishii February ee sanadkii hore.
Hubka laga iibinayo dalkaasi Baxrayn ayaa waxaa ka mid ah maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha F-16 oo injiinkooda ama matoorkooda la casriyeeyey.
Dalka Baxrayn ayaa ah isbahaysi muhiim ah oo maraykanku ku leeyahay gobolka khaliijka ,iyadoo martigelisa kooxda shanaad ee ciidamdda badda ee Maraykanka.
Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegaya in madaxweyne Obama uu ka walaacsanyahay heerka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Baxrayn ,iyadoo ururada u halgama xuquuqda aadanhuna ay si weyn u canbaareeyeyn qorshaha uu maraykanku hubka kaga iibinayo dalkaasi Baxrayn.